Kpido: ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị | Martech Zone
Kpido: ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị
Beingbụ onye gị na mpaghara ekike nke Salesforce abụwo nnwale dị ịtụnanya, mana usoro mkparita uka maka imepụta, izipu, na imelite nkwupụta anyị nke ọrụ abụwo ọrụ dị ukwuu. Mgbe ụfọdụ, m na-eche na m na-etinye oge dị ukwuu n'ide ederede nke ọrụ karịa ka m na-arụ ọrụ n'onwe ya! Ghara ikwu, ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ụdị nke ya, ọkwa nke nkọwa dị mkpa, yana usoro maka ịmekọrịta na ịkwado akwụkwọ ahịa. Dị ka ahịa na
Signbanye nbanye otu egosila na ọ ga - arụ ọrụ gafee osisi - ma jiri ntinye aka mmadụ iji mezue mpempe akwụkwọ ọdịda, ma ọ bụ ugbu a site na iji teknụzụ ịkwụ ụgwọ iji tọghata onye ahịa ngwa ngwa. Visa na-enye otu akara aka na sistemụ a na-akpọ Visa Checkout nke nwere nnabata dị ukwuu. Site na uto ngwa ngwa na ọnwa 10 gara aga, Visa Checkout ahụla nnabata dị ukwuu na ọnụego mkparịta ụka. Ha ga-agba ụfọdụ nnukwu azụmaahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi n'oge ọkọchị a. Rute ugbu a,
LiveSite site na vCita na-ewe nsogbu niile nke ịhọpụta oge, ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị, njikwa kọntaktị na ọbụnadị ederede na itinye ya na mmịfe mara mma na weebụsaịtị gị. Key Key nke LiveSite site na vCita Kpọtụrụ Management - Wegide ozi ndị ahịa ma mee ka mkparịta ụka ha na ndị otu gị mara. Nchịkọta weebụ na-enye gị ohere ijikwa kọntaktị, nweta nghọta, soro mmekọrịta ndị ahịa, zaghachi ma soro site na iji ngwaọrụ ọ bụla. Nwere ike imezi nkwukọrịta onye ahịa, ọkwa na ncheta.